विमानस्थलमा सामान जफत गर्ने क्रम जारी, सरकार नै लुटेरा भएपछि कसैको केही लाग्दैन – Rastriyapatrika
विमानस्थलमा सामान जफत गर्ने क्रम जारी, सरकार नै लुटेरा भएपछि कसैको केही लाग्दैन
२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारमा यात्रुको समान जाँचमा निकै कडाइ गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा समान ल्याए जफत गरेर राखिदिने काम भइरहेको छ । विमानस्थल भन्सारका हाकिम यो क्रम अझै जारी रहेको बताउँछन् ।
यसअघि खुकुलो रहेको भन्सार जाँचमा कडाइ भएपछि अहिले धेरै यात्रुले विमानस्थलमा सास्ती भोगेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग केही प्रश्नहरु सोध्यौं ।
पहिलो दिनमै सयौं बढी रक्सीका बोतल आउँथे । हामीले कडाइ गरेपछि अहिले दैनिक कहिले ५-७ बोतल त कहिले १०-१२ बोतल मात्रै जफत हुन्छ । विस्तारै तोकिएभन्दा बढी सामान ल्याउने क्रम घट्दै गएको छ । केहीले थाहा नपाएर ल्याउनुभएको हुन्छ भने कतिले थाहा पाई-पाई पनि ल्याउनुहुन्छ ।
त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर नेपाल आउने विदेशी एयरलाइन्सहरुलाई पनि औपचारिकरुपमै नेपालको भन्सारका नियमहरुबारे जानकारी दिएका छौं । कतार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, हङकङ, दुबई सबैतिरबाट आउने वायुसेवालाई भन्सारमा गरिएको कडाइबारे जानकारी दिएर आफ्नो यात्रुलाई सेचत गर्न भनेका छौं ।
पहिले पनि समय-समयमा यस्तो कडाइ हुन्थ्यो, पछि चेकजाँच फितलो हुन्थ्यो । यसपटक पनि यो हो-हल्ला कुनै अवधिसम्मका लागि मात्रै हो कि ?
पहिले लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयन नगर्दा अहिले समस्या भएको जस्तो देखियो । तर, अब भविष्यमा पनि हामी यस्तो कडाइलाई निरन्तरता दिन्छौं । नियम कानुन मिच्ने छुट कसैलाई कहिल्यै हुँदैन । हामी विमानस्थलमा लगातार यो निगरानी जारी राख्छौं । विदेशबाट जति पनि सामान ल्याउनुस् भन्न सकिँदैन ।
हाम्रो देशमा प्रिमियम रक्सीमा अन्तःशुल्क र अन्य कर धेरै हुँदा धेरै महंगो पर्छ । त्यही रक्सी विदेशमा ड्युटी फ्रीमा किन्दा सस्तो पर्छ ।
नियम मिचेर धेरै परिमाणमा रक्सी नै आउँछ । यसले समस्या ल्याएको हो । तर, यहाँ अहिले झिटीगुन्टा आदेश निकै कडाइका साथ लागू भएको भएको छ । विस्तारै यस्तो क्रम घट्दै गएकाले अब स्थिति सामान्यमा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
मलाई लाग्दैन कि झिटीगुन्टा आदेशले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई अन्याय गरेको छ । किनभने अहिले पनि दिनमा २-३ सय टेलिभिजन सेट विनाभन्सार विमानस्थलबाट आउँदैछन् । एकजनाले ल्याउँदा एउटा मात्रै त हो नि भन्ने जस्तो लाग्ला, तर सयौंले ल्याउँदा त्यसको मात्रा थोरै हुँदैन । सरकारले राजस्व मात्रै हेरेको भए यस्तो छुट पनि दिँदैन थियो होला नि !
एउटा पनि समानमाथि कसैले बदमासी गर्न पाउँदैन । जफत भएको समान सरकारको हो, सरकारको भन्नु अन्ततः नागरिककै सम्पत्ति हो ।
बरु सामान जफत हुँदा कतिपय यात्रुहरु नै गालीगलौजमा उत्रनुहुन्छ । हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्छ ।
तर, जस्तो अवस्था भए पनि मैले कर्मचारीलाई नरम भएर काम गर्नुस् भनेको छु । म तपाईंहरुलाई पनि स्वागत गर्छु कसरी हाम्रा कर्मचारीले यस्तो अवस्था ह्यान्डल गर्छन् भन्ने स्थलतगत रुपमै हेरौं, आउनुस् ।
यसमा सबैले संयमता अपनाएर कानुन कार्यान्वयनमा हामीलाई सहयोग गरिररहनुभएको छ, अब पनि सहयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि धेरै प्रयास र काम भएका छन्, हुँदैछन् । थप योजनाहरु पनि आगामी बजेटमार्फत आउलान् । सरकारले आफ्ना लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्तरराष्ट्रिय रुपमा भएका सम्झौताहरु क्रमशः कार्यान्वयन पनि गर्ला ।